Horudhac: Liverpool vs AC Milan… (Labo ka mid ah kooxaha ugu taariikhda weyn Champions League oo caawa markale kulmaya & Zlatan Ibrahimovic oo…) – Gool FM
Horudhac: Liverpool vs AC Milan… (Labo ka mid ah kooxaha ugu taariikhda weyn Champions League oo caawa markale kulmaya & Zlatan Ibrahimovic oo…)
(Liverpool) 15 Sebt 2021. Garoonka Anfield ee magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa caawa marti gelinaya kulan kugu qasbi kara inay xusuustaada dib u laabato marka ay naadiyada Liverpool iyo AC Milan ay caawa ku kulmaan wareegga guruubyada ee Champions League xilli ciyaareedkan.
Kulankan ayaa ka tirsan guruubka B ee tartanka Champions League, waxaana uu kulminayaa 13 koob oo tartanka horyaallada Yurub ah maadaama ay Reds qaadday lix jeer, Milan-na ay hanatay toddobo jeer.
Labadan naadi ayaa fiinaalka Champions League isku arkay labo jeer qarnigan, mid walba ayaa markeeda ka adkaatay tan kale iyadoo kooxda Ingiriiska ah ay qaadday kii 2005 kaasoo xusuus gaar ah lahaa markii ay ciyaarta kusoo laabatay iyadoo saddex gool lagu leeyahay sidoo kalena koobka rigooreyaal ku qaadday, halka fiinaalkii 2007 ay Rossoneri ku qaadday natiijo 2-1 ah.
Garsooraha: Szymon Marciniak (Poland)
Tababare Jurgen Klopp ayaa ka walaacsan dhaawaca da’yarka khadka dhexe ka ciyaara ee Harvey Elliott kaasoo ay dhibaato kasoo anqowga kulankii Leeds ee toddobaadkan kaasoo ka tirsanaa horyaalka.
Sidoo kale, waxaa Liverpool ka maqnaan doona Roberto Firmino halka Neco Williams iyo Takumi Minamino shaki weyn la gelinayo.
Dhinaca kale, Sida Reds oo kale, Milan ayaa wajaheysa dhaawaca xiddig laf dhabar ah, waxaana safka uu Macallin Stefano Piolo usoo xushay ciyaartan ka maqan Zlatan Ibrahimovic kaasoo dhaawac qaba.
Si la mid ah, Tiemoue Bakayoko iyo Rade Krunich ayaa dhaawacyo kala duwan iyaguna ku seegi doonaan booqashada Anfield.
Liverpool iyo AC Milan ayaa kaliya labo jeer ku kulmay tartanka horyaallada Yurub iyadoo labadaas jeerba ay ahaayeen fiinaalladii UEFA Champions League ee 2005 oo ay Reds rigooreyaal 3-2 ah ku qaadday iyo 2007 oo ay kooxda Taliyaaniga ah ku adkaatay 2-1 isla markaana ku dhammaaday waqtigii caadiga ahaa.
Kaddib lix guul ah oo ay garoonkeeda kaga gaartay kooxaha taliyaaniga toddobadii jeer ee ugu horreysay oo ay tartankan ku marti geliso iyadoo hal guuldarro la kulantay, haatan waxay guul la’aan ku tahay labadii jeer ee ugu dambeysay oo ay kooxaha Serie A ciyaara garoonkeeda kula dheeshay iyadoo 1-1 barbarro ah la gashay Napoli xilli ciyaareedkii 2019/20 halka guuldarro 0-2 ah ay kala kulantay Atalanta fasalkii hore ee 2020/21.
AC Milan ayaa guuleysatay kaliya hal jeer 13-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay kooxaha Ingiriiska ku wajahday tartammada Yurub iyadoo afar barbarro gashay siddeed jeerna la garaacay, guusha kaliya ee tirsaneysana waxay ka gaartay Arsenal ciyaar dhacday February 2012 markaas oo ay ku adkaatay 4-0, waxaana xusid mudan in dhammaan 13-kaas ciyaarood ay ahaayeen kuwo ka tirsan wareegga 16-ka ee Champions League ama Europa League.
Tan iyo bilawgii xilli ciyaareedkii 2017/18, kaliya labo naadi ayaa Liverpool oo 25 guul gaartay kaga guulo badan Champions League waxayna kala yihiin Bayern Munich (31) iyo Manchester City (30), sidoo kalena, waa labada naadi ee dhaliyay goolal ka badan inta ay Liverpool tartanka ka dhalisay muddadan oo 95 halka Bavarian ay dhalisay 112, Man City-na ay dhalisay 96 gool.
AC Milan ayaa kaliya labo guul gaartay siddeeddii ciyaarood ee ugu dambeysay tartammada Yurub iyadoo afar barbarro gashay labo jeerna la garaacay waxayna dhammaantood ahaayeen kulammada Europa League ee xilli ciyaareedkii hore, kulankan ayaase noqon doona kii ugu horreeyay ee ka tirsan UEFA Champions League tan iyo bishii March ee sanadkii 2014 markaas ay Atletico Madrid wareegga 16-ka ku reebtay naadiga Taliyaaniga ka dhisan.
Bayern Munich, Chelsea, Juventus oo guulo gaaray & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa lagu daah furay Champions League… SAWIRRO
Horudhac: Inter Milan vs Real Madrid… (Nerazzurri oo xilli ciyaareedkii labaad oo xiriir ah guruubka ku wajaheysa naadiga ugu guulaha Champions League)